Indawo egqibeleleyo enegadi yangaphandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguPierfrancesco E Barbara
UPierfrancesco E Barbara unezimvo eziyi-24 zezinye iindawo.
Le ndlu intle ibekwe kumgangatho ophantsi: ikhitshi elinendawo yomlilo, amagumbi amabini ahonjiswe kakuhle aphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Ukungena ngokuzimeleyo ukusuka kwisikwere esincinci kwilali yaseSant'Appiano.
Umphandle osondeleneyo uxhotyiswe ngokupheleleyo kwaye unakho konke ukonwabela ubusuku obumnandi. I-swimmingpool yi-300 mt kude nendlu yakho.
Sibekwe kwelinye lamatye anqabileyo afihliweyo eTuscany, imizuzu nje eyi-10 ukusuka eBarberino Val d'Elsa, ilali encinci nepholileyo. Ifakwe kanye phakathi kweSiena kunye neFlorence, le ilungele abo bafuna ukuphumla okucocekileyo kwimeko yelizwe. Ngokugqithisileyo, yabucala kwaye izolile.
Le ndlu ikwilali encinci kakhulu entliziyweni yeChianti, eTuscany. Isiqingatha phakathi kweFlorence kunye neSiena uya kufumana izulu loxolo kwiinduli zeTuscan. Ukusuka eSant'Appiano (igama lelali) unokufumana lula indalo entle ngeenyawo okanye ngebhayisekile okanye uthathe imoto yakho uhambe kwiindlela ezimangalisayo eziya eFlorence okanye eSiena okanye uzipholele kwindawo emangalisayo yasemaphandleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Pierfrancesco E Barbara
Born and bread in Sant'Appiano, with my family, I'm a wine producer but first of all I'm passionate about wine. I'm a sommelier and I love to taste new wines not only from Tuscany.…
Siyavuya ukucebisa indawo yokutyela emnandi, iipanorama ezintle kunye netoni yeendawo kunye nezixeko ezintle ongazindwendwela. Sisesandleni sakho emini kwaye kwifowuni ngexesha likaxakeka ebusuku.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Barberino Tavarnelle